Kufananidza kwenzira dzekugadzira nzira muBOPET Maindasitiri
na admin on 20-08-21
Parizvino, kune maviri akasiyana maitiro ekugadzira nzira muBOPET indasitiri, imwe iri kuita slicing process, imwe iri directly-melting. Isati yasvika 2013, musika wainyanya kutarisirwa kuita slicing, apo mushure ma 2013, kufudza boka kwakaunzwa. Zvinoenderana nehuwandu hwaZhuo Chuang, nekupera kwe ...
Mamiriro Ezvino mamiriro uye Tariro yePTA Chain uye Musika
PX ndiyo inotungamira mbishi pazvinhu zvese zvayenzi indasitiri, Iko kushandurwa kwemaindasitiri kune kukosha kwakanyanya kune iyo chaiyo yakatarwa indasitiri. kupinda zvinyoronyoro kuvandudza kweChina kuzvigutsa mune Xylene Road Research. Kutanga, tarisa kune yepasi rose PX kupa uye de ...
Genzon Novel Equipment, kuenda ku "2019 Suqian Green Viwanda Expo"
Musi wa 28 Gunyana, chiitiko chemunharaunda che1999 Suqian Green Viwanda Expo chakaitirwa kuvhurwa kukuru muSuqian Exhibition Center. Dingindira reGreen Fair iri "rakasvibirira, kubatanidza uye kusvetuka", Tarisa pane iyo indasitiri yakasvibira nehupfumi hwehupfumi kuitisa musangano wehupfumi nekutengeserana ...
Mutevedzeri gavhuna weJiangsu Province vanoshanyira Genzon Novel Equipment
PaSeptember 25, Jiangsu Province Provincial Major Projekiti Kuvaka Kukurudzira Musangano yakaitwa muShuang County, Shuqian City. Musangano uyu wakanangana nekanzuru-nhanho nekugadzira-yakanangana nemapurojekiti makuru kucherenga musangano wekurudziro. Vanobuda mudunhu
ISO9001: 2015 Huremende Management System Standard Kudzidziswa Held
Musi waZvita 13, GENZON Novel Equipment yakaitisa mazuva maviri ekudzidziswa kwemaitiro eruzhinji rwegore ra2015 yeiyo yemhando yepamusoro system. Vanhu vanosvika makumi mana nevaviri vakapinda muchidzidzo ichi. Nzvimbo yekudzidziswa Pakutanga kwemusangano, Mr. Zhang Tao, mubatsiri wezvekuValin, akatanga akapa ...
Kubva Genzon Novel Equipment yapedza kubatanidzwa nekugadziriswazve pfuma uye kuziva iyo yakatsetseka kutanga-yekugadzirwa kwemutsara, mune rumwe ruoko ...
na admin on 20-05-06
Sezvo Genzon Novel Equipment yapedza kubatanidza uye kurongazve zvinhu uye kuziva kutanga kwakashata kwekugadzira tambo yekugadzira, mune rumwe ruoko, Genzon yakatarisana nekukwidziridza kwetarenda yepamusoro-soro, Kugadzwa kweSystem uye neVadzidzi kudzidziswa system, kune rumwe rutivi, kuita chiratidzo chitsva ...
Shuyang Genzon Novel Equipment Co, Ltd